Sizophila neCovid-19 impilo yethu yonke - Ilanga News
Home Izindaba Sizophila neCovid-19 impilo yethu yonke
MHLELI; kunodaba oluphume kwiLANGAlangeSonto layizolo (19 April) lapho kuphawula khona uSolwazi uJonathan Jansen, owake waba wumphathi (Vice Chancellor) enyuvesi yaseFree State, futhi owaduma kakhulu ngenkathi abafundi bamaBhunu behlukumeza abasebenzi abamnyama.
Ubekhuluma ngokuthi izikole mazivalwe unyaka wonke bese abafundi bedluliselwa emakilasini angaphambili ngonyaka ozayo.
Kuningi okushiwoyo nokuvelayo ngeCovid-19, okwenza sithathe sibeke, kodwa singacaciseleki, siphinde singacaciselwa.
Nginoluvo engifisa ukulubeka lokuthi iCovid-19 kasikacaciselwa (ngayo), kasikacaciseleki ukuthi ibangwe yini, kusakhulunywa ngegciwane eliqhamukaphi, kanjani, lize liqhamuke nje kwakwenzenjani; kuthule.
Ngisho ngoba le nto yabikezeleka eminyakeni yakudalo. Kunencwadi ebhaliwe ecacisa ngokusobala ukuthi kuyobakhona ubhubhane oluyoba ngo-2020, omunye wezigwilikane ezinkulu, uBill Gates, wayimemezela into efana nale, ukuthi kuyobakhona ubhubhane olufana nalolu.
Umbuzo esisala nawo uthi, lolu bhubhane sasingalulungiseleli ngani ngaleso sikhathi? Umhlaba ugcwele ososayensi, yizanusi, esinye sazo uBaba Credo Mutwa osanda kudlula emhlabeni, naye owayesibikezele lesi sifo.
Ungengitshele ukuthi ososayensi abangaka babengehlulwa wukuqalelela, babheke ukuthi lolu bhubhane olubikezelwayo luyobe lubangwa yini, luqhamuka kuphi, lungagwemeka kanjani. Ngibona wonke umuntu wavele wazithela ngabandayo.
Ngisakholelwa kakhulu mina ekutheni kusenamazwe esiwabiza ngokuthi ngamazwe okuqala emhlabeni, kunamazwe asezingeni lesibili, kunamazwe asezingeni lesithathu njengeNingizimu Afrika.
Ngikholelwa ekutheni singakwe-nza okwenziwa ngamanye amazwe, kodwa siyaqikelela yini ukuthi sisemazingeni angefani.
Ngikholelwa ukuthi elakuleli kalisoze laba seduze kweChina kumbe neMelika ngokwezomnotho.
Okwenziwa yiMelika kungebelula ukuba kukopelwe ngelakuleli ngokubheka izimo zayo zezomnotho nokuthi siqhamukaphi.
Sisenenkinga yokungaqasheki kwezingane ezinamajazi
Sisebasha kwinkululeko, kuyimanje sisashaywe yisimo sokuntshontsha (fraud) nokukhwabanisa kakhulu kuleli zwe lethu.
Kuningi okusasibhekile thina esesihlaselwa yi-Covid-19 njengamanje. Impendulo engiqonde uku-yisho mayelana nokuvalwa kweziko-le ukuthi ngiyaphikisana noSolwazi Jansen.
* Isimo sakuleli sezemfundo kasifani nesemfundo yakwamanye amazwe. Sisebasha kwinkululeko, kade sinamaPrivate Schools, amaModel C Schools, izikole ezi-nganakiwe, namanje ezisekhona. Zinganakiwe nje izingane ezifunda kulezo zikole imindeni yazo ise-nhluphekweni ebabazekayo.
* Sinomthetho othi ingane kayingathintwa ekilasini, ingashaywa. Lihle iqiniso, abanye bothisha baphumule nje, bajabulile ngoba ezikoleni bahlukunyezwa yizingane lezi ezingasashaywa. Kangisho ukuthi izingane mazishaywe, kodwa othisha bakuthola kuwukuphumula okumnandi lokhu, ukuthi izingane ezibahlukumezayo basathe ukuhlukana nazo.
Ziningi izinkinga esibhekene nazo kwezemfundo, lokho kucacisa ukuthi kukhulu okusafuneka kwenziwe ngezemfundo.
Sinezingane ezinamajazi eziqu, kodwa kaziwutholi umsebenzi, kungani? Ngakho ukuvala kuvulwe ngonyaka ozayo kuyobe kukhubaza kakhulu ingane yomuntu omnyama, hhayi eyowolunye uhlanga.
Izingane zabamhlophe zahlelelwa kudala ingqalasizinda
Ezabamhlophe izingane kumaPrivate School ziyafunda ngoba izingqalazizinda zakhona kumbe zenziwa kudala. Ezasemakhaya zona? Kithina kwethulwa uhlelo lokufundisa ngemisakazo, zingaki izingane ezilalela umsakazo?
Umdlulisa kanjani umuntu kade ezothi noma efundile kodwa angakulungeli ukuba abe kuleyo Grade elandelayo?
Ake kuhlale phansi othisha, izi-nhlangano zabo nezinyunyana zothisha kube yibona abanika uhulumeni ukuthi nakhu thina esikubonayo, bese kubanjiswana nongqo-ngqoshe wezemfundo.
I-Covid-19 ngicela ukukubeka ngembaba ukuthi ngeke iphinde idlule, ikhona ikhona.
Uma kuwukuthi siyolwa iCovid-19 nge-lockdown kwakufanele lokho sikwenze ngeHIV/Aids. Umengameli usho kahle ukuthi emuva kwe-lockdown kuyofanele siphile njengabantu abasha ezweni elisha. Siqhubeke nezinto ebezivele zenziwa kukhona iCovid-19 njengokugeza izandla, singabe sisehluka kumbe sihlehlele emuva.
Okwesibili, kunoSolwazi waseHarvard University, olibeke ngembaba elokuthi ubona ibanga loku-qhelelana lizokuba khona kuze kushaye u-2022. Izimpawu zonke ezitshengisa ukuthi iCovid-19 ngeke idlule ngisho amazwe angaqhubeka ne-lockdown.
Bakhona abaziyo iqiniso ngeCovid-19
Kuphela into okufanele yenzeke manje, ososayensi nabelaphi bazo zonke izinhlobo nabendabuko, mabafune ikhambi elizogwema ukutholakala nokusabalala kweCovid-19, hhayi ukuyelapha kodwa ukuyigwema. Ngoba ukuyelapha sichaza ukuthi iyophela tu, ngeke isaphela.
Okunye engifuna ukukugcizelela wukuthi kucacile ngokushiya ngaphandle abelaphi bendabuko ukuthi kukhona le mfihlo abebezoyibona.
Kuyaziwa ukuthi bakhona laba abayizinhlanya, abaphiwe ukuthi bayakwazi ukutshelwa nokuboniswa nokubona izinto, ngakho bazoyiphahluka imfihlo.
Nokho umhlaba uyazi ukuthi iCovid-19 iqhamukaphi, wazi kusekude, kuphela baxakwe yindlela ehlasele ngayo abebengayilindele. Okubuhlungu kakhulu kuleli kuzoshayeka umuntu
Lizovela iqiniso ngeCovid-19 ekugcineni.
Okokugcina, ngicela ukuqwashisa umengameli ukuthi imali ezodliwa ngokukhwabanisa kule Covid-19 kuleli zwe lethu inkulu ngendlela eyisimanga, futhi seyiqaliwe. Njengalokhu ayethe kuzoqashwa kakhulu lokho, makaqinise isandla.
Previous articleNabadlali mabeseke abantulayo kulolu sizi
Next articleMawaqashelwe amampunge ngeCovid 19